Wararka Maanta: Khamiis, Sept 7 , 2017-ONLF : Go’aanka dowladda Soomaaliya waa mid ka soo baxay Itoobiya
Caddaani ayaa sheegay in warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya u arkayaan in uu yahay mid ay dowladda Itoobiya ay soo dhiibtay, waxaana uu intaa ku darray in go’aanka noocaas oo kale ah aheyn mid u qalma dowladda Soomaaliyeed.
‘’Annaga waxaan u aragnaa bayaankaa in uu qoray Ninka lagu magacaabo Gabre iyo safiirka Xamar jooga, ee ma’aha bayaan u qalma dowlad Soomaaliyeed in ay soo saarto’’ ayuu yiri Caddaani.
Waxaa uu iska fogeeyay in Ururka ONLF yahay Urur Argagixiso oo la mid ah Al-shabaab sida ay dowladda Soomaaliya sheegtay, isaga oo sheegay in arintaasi tahay mid la doonayo in lagu marin habaabiyo shacabka Soomaaliyeed.
‘’Ururkan waxa uu yahay waxaa ka marqaati ah shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba shucuubta ku dhaqan Geeska Africa, waa la yaqaanaa Ururka ONLF waa Urur xaq u dirir ah, dhulka Ogaadeeniya ayaan ka dagaallannaa, marka waxaan leeyahay waa nasiib daro umadda Soomaaliyeed ku dhacday bayaanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya’’ ayuu hadalkiisa sii raaciyay afhayeenka Ururka ONLF.
Arbacadii shalay ayeey aheyd markii bayaan ka soo baxay xukuumada Soomaaliya lagu sheegay in Ururka ONLF yahay Argagixiso, iyaga oo dhinaca kalana difaacay ku wareejintii dowladda Itoobiya Cabdkariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax.
Afhayeenka Ururka ONLF oo VOA weydiisay halka uu ku dhashay Qalbi Dhagax waxaa uu yiri’’ Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi-Dhagax waxaa uu ku dhashay gobolka Mudug, deegaan hoostaga degmada Gaalkacyo, halkaasoo uu ku soo barbaraay oo wali reerkiisu degan yihiin, gobollo badan oo Somaaliya ah ayuu ka shaqeeyay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayuu ahaa, dagaaladdii 1981kii ayuu ku dhaawacmay’’
Dadka Soomaaliyeed oo siweyn uga war dhowrayay jawaabta ay dowladda Soomaaliya ka bixiso ku wareejinta Itoobiya Qalbi-Dhagax ayaa markii danbe su'aalo badan ka keenay bayaanka ka soo baxay xukuumada oo markii ugu horeysay Ururka ONLF ku sheegay mid Argagixiso.